Goobaha Kubada Cagta ee Goobjoogayaasha Online - Codes-ka Bustou Online Online
Casino Online Xeerarka Bonus > Goobaha Kubadda Cagta ee Guryaha ee Georgia
(945 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Loading ...Georgia waa mid ka mid ah waddamada yar ee Koofurta Kuurfureed, halkaas oo khamaaristu ay tahay mid sharci ah. Warshadaha khamaarka ee waddanku waxay dib u eegayaan maalmaha NEP, marka khadka ugu horeeya ee laga furo Tbilisi. Si kastaba ha ahaatee, waxay haysteen muddo dheer (seddex sano) waxayna si tartiib tartiib ah u beddeleen waxqabadyada May 1928, markii dhaqdhaqaaqyada ciyaaraha khamaarka ee ka jira dhulkii Midawga Soofiyeedka la mamnuucay.
Waqtigaas, labadaba deriska Turkey, Ruushka iyo Azerbaijan, ganacsiga khamaarka ayaa ku jira xaalad aad u adag, Georgia casinos waxay u furan tahay dhammaan martida. Si kastaba ha ahaatee, arrinta khamaarka iyo gaar ahaan dhibaatooyinka la xiriira khamaarka, ayaa si joogto ah u kaca. Wadanku wuxuu si joogta ah uga hadli jiray sharci dejiyeyaasha iyo muwaadiniinta caadiga ah ee ku saabsan dhinaca xun ee khamaarka.
Liiska ugu sareeya 10 Goobaha Kubadda Cagta ee Goobta Goobta
Fikradda guud ee dadka ku saabsan khamaarka, waa dad badan oo dooranaya khamaarka sida mid ka mid ah dhaqdhaqaaqyada ay jecel yihiin. Daraasad kiis oo dhowaan lagu xaqiijinayo ayaa xaqiijinaysa in dadka reer Giriiggu si wanaagsan ula xiriira khamaarka. Georgian waxay fahamsan yihiin in casinos soo jiidatay caasimadda dibadda ee loo baahan yahay, oo ay la socoto ciyaartoyda dalxiisayaasha.
Baarlamaanka Georgia ayaa hadda ka fikiraya sharci qabyo ah oo loogu talagalay yaraynta saameynta taban ee khamaarka. Soo jeedinta waxay inta badan la xidhiidhaa xaddidaadda helitaanka khadka casriga iyo hay'adaha kale ee khamaarista ee dadka deegaanka, iyada oo la tixgelinayo mushaarka. Waxaa la soo jeediyey in ay u oggolaato khamaarka kaliya muwaadiniinta kuwaas oo mushaarkoodu gaaro ugu yaraan 500 GEL, iyo kuwa aan ka yarayn 5000 GEL xisaabtooda bangiga. Soo jeedinta wali waa la tixgelinayaa.
Khamaarka internetka ee Georgia
Khamaarka internetka ee Georgia waa sharci ahaan. Muuqaal gaar ah oo ka mid ah waaxdan waddanku waa xaqiiqda ah in dhammaan khadka casiin-ku-saleysan ee dhulkooda ku yaal ay leeyihiin boggooda internetka. Warshadaha khamaarka ee internetka ee Georgia ayaa ka shaqeeya tiro dad ah oo ka shaqeeya gudaha iyo dibedda, maaddaama shuruudaha helitaanka liisan ayadoo la raacayo sharciga khamaarka internetka ee Georgia ay aad u fudud yihiin. Ciyaarta ciyaar khamaar ee internetka ah ee Georgia waxay noqon kartaa naadiyo is-dhexgal ah oo matala qolal leh kombiyuutaro ku xiran internetka oo la dejiyo goobaha casino ee gudaha iyo dibedda ee stvu.
Georgian waxay jecel yihiin in ay ku ciyaaraan casinos online ee kooxahan, laakiin hadda dad badan ayaa isticmaalaya ujeedkadaan qalabkooda guriga - kombiyuutarada, telefoonada gacanta iyo wixii la mid ah.
Dhawaan, Baarlamaanka Joorashka ayaa tixgeliyey in la mamnuucayo xayeysiiska khamaarka ee dalka. Haddii ay dhacdo in hindisaha la helo xoogga sharciga, xaddidaadana waxay sidoo kale saameyneysaa khamaarka internetka. Sidoo kale, hindise-bixintu waxay bixisaa xakameyn xooggan oo ku saabsan ka qayb-galka khamaarka dadka da'doodu ka yar tahay da'da yar, iyo ganaaxyo ka badan wax kasta oo anshax-xumo ah oo ka yimaada qaybaha hawlwadeennada.
Georgia Online - Khamaarista Georgia
Georgia - waa waddan qorrax leh dabeecad qurux badan iyo xaalado aad u fiican oo loogu talagalay madadaalada iyo dalxiiska. Makhaayadaha Fikroolka iyo Cuntada, iyo sidoo kale martigelinta dadka ee soo jiidatay waddankan oo leh dad ka kala yimid adduunka oo idil. Xaaladaha khamaarka ku jira qaabka dhulka, iyo internetka ayaa u ogolaanaya inay ku raaxaystaan ​​ciyaarta. Laakiin waannu ka hadli doonnaa goor dambe. Sidaas, CasinoToplists ayaa loo diray Tifsi!
Booqashada Casriga ee Georgia:
Cayaaraha casinos ee dhulka ku yaalla ee Georgia waxay joogaan internetka;
Waxaa jira labada shirkadood ee reer Giriiga iyo kuwa caalamiga ahba;
Waxa ay tixgelineysaa biilka lagu adkeynayo helitaanka khayraadka ciyaaraha caalamiga ah ee ciyaaraha internetka;
Sida loo ciyaaro casino online ah? Waxbarashada tallaabo tallaabo tallaabo ah;
Goobta Goobta iyo asalka taariikhda gaaban;
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Georgia iyo Georgian;
Khamaarista online ee Georgia - asalka taariikheed
Ka hor inta aanaan sharaxin xaaladda hadda ee khamaarka internetka ee dalka, waxaanu si kooban u soo bandhignay taariikhda khamaarka ee Georgia.
Year Isbedelada sharciyada iyo
1801 - 1922 Georgia waa qayb ka mid ah Boqortooyada Ruushka waxayna raacdaa shuruudaheeda marka la eego khamaarka. 1918, mudo gaaban oo madaxbannaan, iyo 1922, oo wadajir ah Armenia iyo Azerbaijan ayaa qayb ka ahaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaliyeed ee Transcaucasian Soviet. 1920 ee Tiflis waxay leedahay casinos 2 waxaana ay furtay warshadeeda si loo soo saaro kaararka ciyaaraha. Qodobka 235 ee Xeerka Ciqaabta GSPC ee ka dhanka ah abaabulka dhaqdhaqaaqa sharci darrada ah - xabsi ilaa sannadka 3, iyo hantida oo laga yaabo in lala wareego.
1959 Tbilisi wuxuu u tartamayaa tartanka tartanka. Ganacsi badan oo sharci darro ah.
1990 Ganacsiga khamaarka ayaa helaya sharci sharci. Bandhiggii ugu horeeyay ee «Ori Juja» ee Tbilisi.
1991 Georgia waxay madaxbannaan tahay. Dabeecadda Sosbstvennoe ee khamaarka.
1992 Madaxweynaha Zviad Gamsakhurdia ayaa soo saaray sharcigii ugu horreeyay ee "Lagu hagaajinayo sharciyada lootariska iyo khamaarka kale ee Jamhuuriyadda Georgia." Bixinta liisanka casabiga.
1997 Koodhka canshuurta.
2000 Madaxwaynaha Eduard Shevardnadze ayaa soo bandhigay sharci uu ku mamnuucayo khamaarka. Mashruuca ayaa la diiday. Waqtigan xaadirka ah ee Georgia waxay ka shaqeysaa wax ka badan XINUMX casinos, 20 iyaga ka mid ah ayaa ku jira Tbilisi.
2002 Sharciga 1426-Sun "Iyadoo lagu saleynayo bixinta rukhsadaha iyo ruqsadaha ganacsiga." Xaaladaha cusub ee bixinta rukhsadaha iyo ruqsadaha.
2003 Eduard Shevardnadze, ayaa mar kale isku dayaysa in ay mamnuuciso ganacsiga khamaarka, laakiin waxay ku guulaysatay Madaxwayne Mikheil Saakashvili in 2004. Kombiyuutarka dawladda ee lakulanka.
2005 Qodobka № 1180 "Ku saabsan abaabulka bakhtiyaanasiibka, khamaarka iyo ciyaaraha kale ee faa'iido leh." Waxay u shaqeysaa ilaa maanta, iyada oo wax laga beddelayo tiro badan.
2014 Wadanku wuxuu leeyahay shirkadaha khamaarka ee 94. Inta badan dukaamada cas iyo dukaanka lagu ciyaaro ee Tbilisi, Batumi iyo Kutaisi ayaa raacaya. Ka sokow muwaadiniinta jarmalka ah ee agaasimayaasha ah waa muwaadiniinta Ruushka, Turkiga, Armenia iyo kuwa Boqortooyada Ingiriiska.
2000 - 2017 Khamaarka internetka. Ku dhowaad dhammaan khadka casiin-ku-saleysan, oo haysta liisamada rasmiga ah, furitaanka boggooda internetka ee ciyaaraha internetka. Ciyaartoyda caalamiga ah ayaa si xor ah loo heli karaa.
(Macluumaadka laga soo qaato buugaagta Eugene Kovtun "Waad ku faraxsan tahay waddanka Soviets")
Jihada ku xiran ganacsiga khamaarka internetka?
Inta badan, muddada dheer ee Georgia waxaa la dejin doonaa sharci qabyo ah oo ku saabsan khamaarka online-ka ah ee u shaqeeya ajaanibta. Waxay yihiin xiriirka ugu liita ee arrimaha ku saabsan khamaarka ee gobolka. Landin iyo online casinos waxaa waajib ku ah in ay si taxadar leh u eegaan ciyaartoydooda da'doodu tahay inta badan, iyo sidoo kale horumarinta nidaam si loola dagaalamo ciyaaraha Zavisimostyu- Gamblers.
Taas xaqiiqdaas sharciyadani macnaheedu waa ciyaaryahan?
Waxaa jira casaan-raashinka dhul-beereedka ee Georgia. Ka eeg sidoo kale qaabka internetka. Abaabulka casinos-ka ee aan lahayn analogue-ga oo ku filan oo leh shatiga rasmiga ah ee ku yaala juqraafiyada Georgia waa mamnuuc. Taasi waa, haddii aad ku ciyaarto mulkiilaha Georgia ee ku yaal Georgia wax khidad ah ma leh magac isku mid ah - maaha sharci;
Waxaad ka ciyaari kartaa ciyaaraha caalamiga ah ee caalamiga ah, oo leh liisan gaar ah. Maaha mid lid ku ah sharciyada. Hawlwadeennada caalamiga ah lagama horjoogsado, maadaama ay dhacdo, tusaale ahaan, Ruushka.
Dhab ahaantii, waxaad ku ciyaari kartaa casino adiga oo aan haysan liisan, laakiin markaa sidaas ayaad ku sameyneysaa khatartaada.
Gabagabo: Ciyaartu internetka waxay dooran kartaa inta u dhaxaysa casinos dhulka ku salaysan ee Georgia oo wakiil ka ah qaabka internetka iyo kuwa caalamiga ah.
Sida loo bilaabo cayaaraha ciyaaraha online-ka ee Georgia?
Xulo casiin online ah . Sidee loo ilaaliyaa naftaada markaad dooranayso adeega caalamiga ah? Ka faa'iidi liistada casiinada aaminka ah. Waxay ku taallaa midigta midig.
Xaaladaha waxbarashada . Ka fiiri dhammaan macluumaadka boggaga internetka casino (shuruudaha ruqsadda ee lacagaha kala-soocida iyo kala-tagidda, gunno-gelinta iyo haddii ay jirto war-celin laga helayo casabiga (khudbada internetka, cinwaanka, lambarada taleefanka).
Akhri cayaaraha cayaaraha ku saabsan kheyraadkan online ee shabakada. Xasuuso, in dhammaan dib u eegista ay yihiin kuwo dhab ah, waana la qaabeyn karaa.
Wadahadaladii Money . Waa maxay casino-ku-bixinta ikhtiyaarka ah ee lagu darayo ama ka-noqoshada dhaqaalaha? (By WebMoney, kaararka deynta iyo kaararka baaskiilka ee Visa, Yandex, iwm. Waa maxay shuruudaha ka-noqoshada dhaqaale? Maxay kuu fiican tahay?
Noocyada cayaaraha . Waa maxay noocyada kala duwan ee ciyaaraha la bixiyay, casabkan Ma jiraa wax adiga kugu haboon oo aad jeceshahay?
Ciyaaro bilaash ah . Marka fursad ay ku ciyaaraan habka ugu horeeya, isku day inaad samayso. Just on "wareejiyayaasha". Sidaa darteed waxay noqon doontaa cad cad haddii aad ciyaareyso iyo haddii ay ku habboon tahay. Intaa waxaa dheer, ciyaaraha qaar, sida baccarat or keno maaha mid aad u macquul ah si aad u akhrido sharciyadii hore. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad baratid fursado kala duwan oo istiraatiijiyad ah oo kaa caawin kara inaad si fiican u xakameyso oo aad u isticmaasho bangigaaga.
Goobta Goobta iyo asalka taariikhda gaaban
Georgia waxay ku taallaa Bariga Dhow, waxay leedahay meel u jirta Badda Madow. Wadamada deriska ee ugu dhow waa Ruush, Armenia, Turkey, Azerbaijan.
Xuduudda hadda ka jirta waxay ahayd dad aad u tiro badan xittaa halkan II Millennium BC Golden Da'da Jooriyaanka ayaa ka dhacday boqortooyada boqoradda Tamara ee qarniyadii XII-XIII. Ilaa iyo inta ay xukuumaddu si joogta ah u jebisay waqtigaan, waxay galaysaa dagaalka, ciidamada milateriga iyo siyaasadda. Mawduucyadoodii hore ee laga helay 1918. Waxaa jira sannado badan oo ku yaal USSR.
1991, ka dib burburkii Midowga Soofiyeeti, Georgia waxay noqotay mid madaxbannaan, haddana 1992 waxay ku biirtay Qaramada Midoobay. Maanta, waddanku wuxuu hoy u yahay 4.5 milyan qof. Waa madaxweyne Giorgi Margvelashvili iyo ra'iisal wasaaraha - Irakli Garibashvili.
Georgia ee khariidada Aasiya
Quduuska Quduuska Quduuska ah ee Tbilisi . Tani waa magaca Cathedral Cathinity Cathedral ee Tbilisi. Goobta: Georgia, Tbilisi, Elia Hill. Kaniisadda Young Orthodox, oo uu ka sameeyay Archil Mindiashvili - mid ka mid ah dhismayaasha ugu quruxda badan Tiflis.
Nerikala . Cinwaanka: Mount Mtatsminda ee Tbilisi. Qeybaha ugu da'da wayn ee dhismaha qalafku wuxuu ka tirsanaa qarnigii IV.
Turtle Lake . Goobta: geeska waqooyi ee Buur Mtatsminda, 3 km oo ka yimid Tbilisi. Goobta caanka ah ee caanka ah, taas oo ah baabuurta fiilooyinka.
Anchiskhati . Cinwaanka: st. Shavteli, 9, Tbilisi. Kaniisada ugu da'da weyn ee Georgian Orthodox ee dalka, oo ku beegan qarnigii VI. Sida laga soo xigtay halyeeyga, waxaa la dhisay xitaa boqorow ee of Iberia Villas Udzharmeli.
Keshvati . Cinwaanka: Shota Rustaveli, Tbilisi .. Kaniisadda Ortodoxiga ee St. George horraantii qarnigii labaatanaad.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Georgia iyo Georgian
Georgia - magac magac, oo ka yimid luqadda Carabiga. Is-magacaabidu waa Sakartvelo.
Iberia - waxay ahayd magaca dhulkii Joorjiya ee qarnigii III qarnigii koobaad. e. Maanta waa magaca Spain, tani waa shil. Aabayaashii reer Isbaanishku waxay ka yimaadeen Georgia. Gaar ahaan Yurub, luqadda Basque waxay la mid tahay Georgian.
Luqadda Ruushku maaha mid aad u caan ah dalka, waxaa la fahamsan yahay inta badan dadka waaweyn. Dhalinyarada aan Ruushka ahayn ee si fiican u qabta Ingiriiska.
Dhamaan dadka weli da'doodu tahay 1 million. 770 kun sano, Georgia ayaa heshay, iyo sidoo kale nalka qadiimka ah, kaas oo 34 kun. Sannad.
Xeerarka khamaarka ee Georgia ayaa ku hawlan dakhliga adeegga - waa hay'ad gaar ah oo hoos timaada Wasaaradda Maaliyadda. Hadafkeedu waa inuu abuuro jawi ku habboon ganacsiga, iyo sidoo kale sameynta canshuur fudud oo cad oo khamaarka ku jira.
Adeegga Dakhliga ee Georgia
Sharciga khamaarka ee Georgia wuxuu ku salaysan yahay laba mabda 'oo muhiim ah:
hubinta caddaalad iyo furfurnaanta ganacsiga;
ilaalinta carruurta iyo dadka nugul waxyeello, taas oo keeni karta khamaarista.
Abaabulka khamaarka ee Georgia, ganacsadaha ayaa dooran kara hal ama dhowr goobood oo shaqo ah waxaa ka mid ah casino, mashiinka miiska, miiska miiska, tartanka ciyaaraha, bingo, lotto iyo lotteries. Bixinta ruqsadaha, iyo sidoo kale qawaaniinta iyo kantaroolka qabanqaabiyeyaasha khamaarka waxay qabtaa Adeegga Dakhliga (Canshuuraha Dawladda iyo Maamulka Canshuuraha).
Sharci ahaan, dhammaan oggolaanshaha lagu furayo khamaarka Georgia waxaa laga heli karaa qaab elektaroonik ah, ma jirto baahi loo qabo in laga dhigo maamulka canshuuraha. Dukumeentigu wuxuu shaqaynayaa shan sano oo loogu talagalay hoolka mashiinnada mashiinnada mashiinka lagu ciyaaro, xafiisyada shidaalka ama shirkadaha leh bingo ama bingo, iyo hal sanno kiisaska lootariyada. Shirkadaha lagu helo ogolaansho casri ah ama boosas, waxay codsan karaan dukumiinti si gooni ah ciyaaraha ciyaaraha. Waxay noqon doontaa mid ansax ah illaa muddada xalka ugu weyni yimid.
Baaskiilada Georgia: Canshuuraha
Sharcigu wuxuu bixiyaa khidmadaha sanadlaha iyo rublaha ah noocyada kala duwan ee khamaarka. Khidmadda sanadlaha ah ee ruqsada - waa qadar go'an oo la bixiyo si isku mid ah si isku mid ah. Saddex jeer ayaa la soo dallacaa afar jeer sannadkii wixii shay kasta oo loo isticmaalo khamaarka. Qadarkoodu waa kala duwan yahay iyadoo ku xiran barta khamaarka iyo gobolka uu ku yaala xarunta.
Qiimaha kala duwanaansho. Inta badan kuwani waxay saameeyeen meesha ay hay'addu ku leedahay, tusaale ahaan, canshuurta Tbilisi, wax ka badan meelo kale, laakiin xiisaha khamaarka waa ka sarreeyaa. Wixii ogolaansho ah in lagu furo casino halkan Georgia waa in ay bixiso GEL 5 million sanadkiiba meelo. GEL 1 million Milkiilaha dukaanka maxaliga ah ee furaha ah wuxuu furi doonaa seddex ka mid ah kulamada guddiga kooxda iyada oo aan cashuurta sanadlaha ah ee gobalka, sida mashiinnada moobiilka - isla kooxda.
Qaar ka mid ah casinoska Georgia waxay si buuxda uga dhaafayaan lacagaha sanadlaha ah. Batumi, Kobuletti, Khelvachauri, Anaklia iyo Ganmukhuri ma bixin karaan cashuurta, dhismaha 80 illaa qolalka hoteelka 100. Gobollada gudauriyadeed, Kazbegi, Bakuriani, Kawaltubo iyo Sighnaghi ayaa si buuxda looga sii daayey. Sawirka midabka buluuga ah wuxuu muujinayaa in hay'adaha hela gargaarka loogu talagalay 100 + qolal dhisme, qolal guduudan - 80 +, cagaar - xaalad kasta.
Adeegga Canshuuraha Gudaha ayaa kaa qaadi doona lacago dheeraad ah khamaarka:
cashuurta dakhliga shakhsiga (mushaharka) - 20%;
canshuurta hantida - ilaa 1%;
Cashuurta dakhliga ee shirkadda - 15%;
canshuurta mas'uuliyadda, ee lagu qabtay tartanka - 20%.
Naadiyada ciyaaraha moobiilka, hoolka mashiinka lagu ciyaaro iyo buugaha cayaaraha oo laga sii daayay waajibaadkii lagu rakibay diiwaanka lacagta caddaanka ah ee xisaabinta xisaabaadka. Waa inay isticmaalaan kaliya haddii aad bixiso adeegyo dheeraad ah, sida iibinta cabitaanka ama cuntada.
ogolaanshaha waqtiga ganacsiga ciyaaraha ee Georgia - maalmaha 20. Waxaad heli kartaa bilaash. Haddii dukumintiga si degdeg ah looga baahdo, waxaa suurtogal ah in la bixiyo GEL 400 ($ 160) - waxay diyaar u noqon doontaa maalmaha 10, GEL 800 (320 $) - 5 maalmo ama GEL 2 kun ($ 800.) - maalinta 1.
Ogolaansho gooni ah oo loogu talagalay ururinta casinoska internetka lama soo saaro, mashaariicdaas oo kale waxay noqon karaan mulkiilayaasha hay'adaha dhabta ah ee haysta shatiga. Waxay xaq u leeyihiin in ay maareyn karaan goobta iyagoo casino ah, xargo, shaashadda ciyaaraha iyo sawirada bakhtiyaanasiibka. Shirkadaha ajnabiga ahna uma hanjabaan - shirkadaha qashin-qubka ah ee sharciga waa laga mamnuucay khamaarka Georgia, sidaa daraadeed rajo-gelinta suuqa ayaa si buuxda u bilaash ah ganacsatada gudaha.
Sida laga soo xigtay natiijooyinka hawlgalka goobahaas ayaa bixiya khidmadda rubuc. Cabbiraadooda waxaa go'aamiya maamulka deegaanka. Waxay ku kala duwan yihiin 30-60 kun GEL. ($ 12-24 kun.). Intaas waxaa dheer, canshuurta dheeraadka ah ee kor ku qoran.
Waqtigan xaadirka ah ee Tbilisi waxa uu soo saaray Batmani 3 (afar ka mid ah hay'adahan oo dhowaan dhisey qol hotel) oo ku yaala Tshaltubo - 11 iyo Kazbegi - 5. Sidaa darteed, qolka mashiinka xakamaynta 1 waxay si rasmi ah u shaqeeyaan sharciyada cayaaraha Georgia 72 dukaamo, shirkado leh 107 bingo ama lotto, 3 iyo 41 khamaaristaha khamaarka.
Dhammaan macluumaadka la bixiyay ee daabacaadda Warbxinta Khamaarka ayaa ku mahad celinaya Theon Shiukashvili - Adeegga Sare ee Dakhliga Georgia. Waxay ka qabatay ciyaaraha garsooraha ee Georgia oo ah afhayeenka, wuxuu leeyahay 10 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan maamulka canshuuraha qaranka iyo mas'uul ka ah bixinta ruqsadaha loogu talagalay ururka khamaarka ee Georgia.
Ka dib markii uu madaxbannaanaa, Georgia waxay isu xilsaartay in ay casriyeyso warshadaha ciyaaraha. Mawqifka juqraafiga ee wanaagsan, maqnaanshaha sharciga mamnuucista khamaarka, iyo sidoo kale daacad u ah warshadaha ciyaaraha ee inta badan ciidammada siyaasadda, heerka hoose ee musuqmaasuqa, fududaynta ganacsiga, xaaladaha ku habboon ee canshuurtu waxay bixiyaan khamaarista Georgia faa'iidooyinka.
Sharciga hadda jira ee Georgia wuxuu sharci ahaan ka jiraa dhammaan noocyada ciyaaraha khamaarka. Waxaa ka mid ah noocyada ugu muhiimsan - khaanadaha casriga ah, ganacsiga baqshiishnimada (oo ay ka mid yihiin shuruudaha), bakhtiyaa-nasiibka, qalabka wax lagu duubo, naadiyada qamaarka. Qaybta internetka, sharcigu wuxuu u ogolaanayaa ururinta mashiinnada shaashadda, shaashadda iyo dhejiska.
Noocyada ururka khamaarka ee Georgia ayaa ah in qalabka nidaamka qalabka elektiroonigga ah waa inuu lahaadaa joogitaan dhab ah (aasaas) dhisme khamaar.
Ganacsiga khamaarka ee Georgia waxaa lagu xakameynayaa ficilladan sharciga ah:
Sharciga Georgia "On organization of lotteries, khamaarka iyo ciyaaraha faa'iido" ka 25.03.2005 №1180;
Sharciga Georgia "Ruqsadaha iyo Oggolaanshaha" taariikhdiisu tahay 24.06.2005 №1775;
Sharciga Joorjiya "Lacagta shatiga iyo liisan bixinta" laga bilaabo 12.08.2003 №2937;
Sharciga Georgia "On the collection of khamaar" laga bilaabo 29.12.2006 №4250;
Xeerka Canshuuraha ee Georgia oo ka yimid 17.09.2010 №3591;
Amarka Wadajirka ah ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Joorjiya "Oggolaanshaha Shuruucda Milkiilayaasha Imtixaanka Iskuulku wuxuu ogolaanayaa khamaarka iyo ciyaaraha kale ee faa'iido leh" laga bilaabo 14.12.2011 №611-1013;
Amarka Madaxa Howlaha Korjoogteynta Maaliyadeed ee Georgia "Ogolaanshaha Xeerarka" Habka iyo shuruudaha helitaanka macluumaadka, qaabeynta, nidaaminta Adeegyada Korjoogteynta Maaliyadeed ee Gorgorka iyo gudbinta by qabanqaabiyeyaasha bakhtiyaanasiibka, khamaarka iyo ciyaaraha kale ee faa'iido leh "Iyo" Sida ku xusan amarka iyo xaaladaha helitaanka macluumaadka, nidaamkeeda, adeegga kormeerka maaliyadeed ee hawlgalka Georgia iyo gudbinta casino "laga bilaabo 28.07.2004 №94.
Xaaladaha helitaanka oggolaansho
Gudaha Joorjiya, nidaam aad u daacad ah iyo shuruudaha helitaanka ruqsadda (ruqsadda) ee ururka iyo dhaqanka khamaarka.
Shirkaduhu waxay ka diiwaan gashan yihiin Georgia, mulkiilayaasha shirkadahan waxay noqon karaan muwaadiniinta Georgia iyo shisheeyaha.
Bixinta ruqsadaha khamaarka waxay qabtaa Adeegga Dakhliga ee Georgia. Qofka ruqsad bixiyaha ah waa inuu soo gudbiyaa dukumentiyada lagama maarmaanka ah ee foomka la tarjumey iyadoo la adeegsanayo bogga internetka ee IRS.
Qalabaynta qaadashadu wuxuu dooranayaa mudo gaaban oo dukumiinti ah iyadoo ku xiran sharciyada loo dejiyay ee 1 - GEL 2 kun / $ 830, 5 - GEL 800 / $ 330, 10 maalmood - GEL 400 / $ 365, 20 shaqaalaha. maalmood - bilaash ah.
Liiska dukumeentiyada loo baahan yahay si uu u helo ruqsad, oo ku filan oo ku xiran qaabka khamaarka.
Codsade oggolaansho ah si loo abaabulo tartanka, bakhtiyaanasiibka, bakhtiyaa-nasiibka bayaan-bixinta loo gudbiyo Adeegga Dakhliga ee Georgia:
warqad ka timid Diiwaanka Gobolka;
dukumiinti oo caddaynaya khidmadda lacag bixinta;
qandaraaska u dhexeeya deeqbixiyaha iyo qofka ama hay'adda sameeya tikidhada lacagaha tikidhada ah (marka laga reebo cayaaraha, loo qaabeeyo foomka elektarooniga ah), oo tilmaamaya tirada tikidhada la sameeyay;
Xaaladaha (xeerarka) ee ururka cayaaraha faa'iidada leh;
tikidhada tijaabada ah ee cayaaraha faa'iido leh (marka laga reebo ciyaaraha, loo qaabeeyo nidaamka nidaamka elektarooniga ah);
marka laga hadlayo ururka tartanka - waa dukumeenti xaqiijinaya bixinta deeqda abaalmarinta aan ka yarayn 10 kun GEL / $ 4, 15 kun;;
marka laga hadlayo ururka guud ee nidaamka habka elektaroonigga ah (ciyaaraha internetka) - amarka nidaamka-elektiroonigga, kaas oo la tilmaamayo: cinwaanka dhabta ah ee laga maareyn doono cayaaro faa'iido leh iyo ururkooda, liiska iyo liiska cayaaraha, goobta (yada) iyo waqtiga kama dambeysta ah ee lacag bixinta, macluumaadka ku saabsan mamnuucidda ciyaaraha ee shakhsiyaadka ku jira da'da 18.
Si aad u abaabulto oo u qabato ciyaaraha fursadaha internetka (online) ee qabanqaabiyaha ciyaarta, waa inaad haysataa fasax "dhulka" ciyaarta (offline). Ka dib markaad hesho ogolaansho xayeysiiska ciyaarta, mulkiilaha ruqsaddan wuxuu xaq u leeyahay inuu ka dalbado Adeegga Canshuuraadka Gudaha ee Georgia si loo fasaxo in lagu qabto ciyaaraha internetka iyadoo la siinayo liiska kor ku qoran.
La oggol yahay in lagu qabto hawlaha ururada iyo dhaqanka khamaarka ee Georgia waa mid ku habboon sanadaha 5.
Lacag bixinta bixinta ruqsadaha loogu talagalay abaabulka khamaarka ee Georgia waxaa la qaadaa sanadkiiba. Marka hore, deeqbixiyuhu wuxuu bixiyaa sanadka ugu horeeya ee hawlgalka, kadibna sanad kasta wuxuu cusbooneysiiyaa ogolaansho isagoo bixinaya lacag kale.
Khidmadda ruqsaddu waxay ku xiran tahay goobta shaqada ee khamaarka.
Lacagta ruqsadda ee loogu talagalay qabanqaabinta khamaarka ee Georgia
Khidmadda ugu yar ee ruqsadda ee dhaqdhaqaaqa ciyaaraha khamaarka ayaa haya shirkado qabanqaabiya ganacsigan noocyadan ganacsiga ah meelaha munaasabadaha. Nidaamkan waxaa loogu talagalay horumarinta kaabayaasha dalxiiska Georgia.
Sidaa daraadeed, casinos iyo xarumo kale oo khamaar leh oo ku yaal magaalooyinka damaasha ee dalka (Borjomi, Batumi, Kobuleti) waxay ku raaxeeysataa faa'iidooyin badan oo ku saabsan abuuritaanka guddiga fasax si loo sameeyo ganacsi.
Gaar ahaan, qiimaha sanadlaha ah ee lacag-bixinta loogu talagalay in lagu abaabulo casuun ku yaalla Batumi waa kunka kun GEL / $ 250 kun, halka Tbilisi - .. GEL 103.6 Million / $ 5 2 072. Xaaladdan, haddii qofku qaato ogolaansho ah inuu ku qabanqaabiyo casinos ee Batumi ee xaruntan ku yaala hudheelka cusub ee la dhisay oo ay la joogaan qolal aan 250 ah, waxaa laga dhaafaa lacag bixinta oggolaansho sanadaha 100. Intaa waxaa dheer, ogolaansho ayaa lagu siiyaa lacag la'aan ka socota xafiisyada tartanka ee degmooyinka Kazbegi, Tskhaltubo, Sighnaghi.
Xaaladdu waxay la mid tahay cabbirka guddiga si loogu oggolaado in ay qabato noocyo kale oo khamaaris ah (lootooyin, sharaf isboorti, naadiyo qamaar). Tusaale ahaan, khidmadda ruqsadda ee abaabulaha baqshadayaasha ee Tbilisi waa GEL 200 kun / US $ 8.3 kun sannadkii, halka ay joogaan degaannada maamulka degmooyinka Batumi, Kutaisi, Rustavi - ... Dhamaan 80 kun geel / $ 33.2 kun . sanadka.
Marka lagu daro khidmadda sanadlaha ah ee oggolaanshaha khamaarka, mawduuca dhaqdhaqaaqyadaas ayaa bixinaya khidmadda maamulka, qaddarka taas oo lagu go'aamiyey iyadoo ku xiran hay'adda iyo cabirka rubuca:
oo leh mishiinka kabta - GEL 1,5-3 kun;
oo leh khadad kasta miiska - GEL 15-30 kun;
oo leh koox kasta oo khamaar looyaro ah - GEL 3-10 kun;
cayaar kasta oo qaab-nidaamiye-nidaamsan - GEL 30-60 kun;
oo leh diiwaangalin lacageed kasta ama waxtar u leh ciyaaraha casino ee nidaamka nidaamka elektarooniga ah, oo ku yaalla bannaanka sheyga loo habeeyay, sida ku xusan go'aanka, ciyaaraha fursadaha ama faa'iidada - GEL 1-1,5 kun;
iyada oo sawir kasta oo xayeysiis ah - 10% of pool of prize.
Lacagta ku jirta xadka loogu talagalay waxaa dejiya maamulka deegaanka.
Qofka haysta ruqsadda, oo aan si habboon u fulin shuruudaha heshiisku wuxuu ku soo rogay ganaax iyo shuruud aasaasi ah oo lagu hagaajinayo dhaqdhaqaaqyadiisa si waafaqsan shuruudaha ruqsadaha looma baahna, muddada ku xaddidan hay'adda soo saartay ogolaanshaha. Ganaaxyada GEL waxay ku kala duwan yihiin hal kun. ilaa 10 kun. / $ 415-4150.
Haddii qofka haysta oggolaanshada, oo loo dhigay waqtigii loo qabtay in loo keeno shuruudaha ogolaanshaha shuruudaha lama fulin shuruudahan, waxay ku soo rogtay ciqaab labaad sedex jeer. Haddii uu dhammaado muddada kama dambaysta ah, oo ay la socoto maalinta labaad oo ah maalintiiba, qofka haysta ruqsad haystuhu ma fulin shuruudaha ogolaanshaha, xaddiga ganaaxa ayaa la saddaxsan yahay. Haddii qofka haysta oggolaanshuhu uusan fulin doonin shuruudaha ruqsadda, go'aanka joojinta oggolaanshaha.
Haddii maadooyinka khamaarka aysan rabin sanadka soo socda in ay sii wadaan waxqabadyada ay filayaan xalinta, waxay ku filan tahay maalmaha shaqooyinka 5 ka hor dhamaadka sanadka bixinta si loo ogeysiiyo Adeegga Canshuuraadka Gudaha, kaas oo kicin kara oggolaanshaha.
Farsamaynta hawlwadeennada xakamaynta
Hay'adaha dawladda dhexe ee kormeera hirgelinta oggolaanshaha mulkiilayaasha shuruudaha khamaarka ayaa shuruuda shuruudaha ruqsadda, Waa Adeegga Dakhliga Gudaha ee Georgia, Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Georgia iyo Adeegga Korjoogteynta Maaliyadda ee Georgia.
Wasaaradda Maaliyadda ee Georgia
Xayiraaddeeda, hay'adaha maamulku waa inay ilaaliyaan oo ay adeegsadaan hababka jawaab-celinta maamulka ee ku-xadgudubyada maadooyinka ciyaaraha khamaarka. Caadi ahaan waxay eegayaan Adeegga Dakhliga ee ku saabsan canshuuraha habboon iyo waqtigaba. Wasaaradda Arrimaha Guduhu waxay xakameysaa fulinta shuruudaha sharciga ah ee ku saabsan helitaanka qalabyada xarun kasta ee ilaalinta. Sidoo kale kormeerka u hoggaansanaanta shuruudaha shirkadda ee ku saabsan ciqaabta ganaaxa waqtigeeda (haddii lagu soo rogay). Shay muhiim ah waa in la keeno tijaabada casriyadaha casriga ah ee deynta ku jira ee dulsaarka dulsaarka, taas oo si adag loo mamnuucay sharciga. Haddii xad-gudubyadan la dhidbay, haystaha oggolaanshaha ee ururka khamaarka waa inuu bixiyaa ganaax weyn. Xaaladda dib-u-soo-noqoshada xadgudubkan waa joojin suurtagal ah oo la xidhiidha maaraynta ciqaabta dambiga ee aasaaska khamaarka.
Georgia - waddan leh siyaasad cad oo caddaalad ah, oo leh canshuur yar oo hooseeya.
Dhaqdhaqaaqa xayeysiiska ee Georgia wuxuu canshuur ku yahay habdhaqan kasta oo ruqsad u leh inuu qabto nooca ganacsiga, wuxuu bixiyaa 5% VAT qiimaha. Canshuurta canshuurtu maaha mid muhiim u ah qofka haysta ruqsada. Si kastaba ha noqotee, wakiilo ka socda ganacsiyada tartanka ayaa ku fekeraya in ay ka fekeraan in canshuurta 15-20% ay faa'iido badan tahay.
Khilaafaadku waa xaaladda canshuuraha kale ee khamaarka lagu ciyaaro (casinos, lotteries, iwm. Hay'adaha Ganacsiga waxay canshuur ka bixiyaan xaddiga 15% dakhliga saafiga ah ee howlaheeda. Sidaa darteed, waxay ku jiraan xaalad la mid ah hay'adaha kale ee ganacsiga ee ku yaala joqraafiga Georgia - kuwani waa hawlo aan la xiriirin bixinta adeegyada warshadaha khamaarka.
Qodobka 35 ee Sharciga Georgia "On the organization of lotteries, khamaarka iyo ciyaaraha faa'iido leh" waxay dejiyaan tiro xadidaad ah ruqsadda milkiilaha ee ku saabsan khamaarka. Tusaale ahaan, looma ogola bakhtiyaa-nasiib-xumo iyo cayaaro faa'iido leh (marka laga reebo bakhtiyaa-nasiibinta baqaarada), iyo sidoo kale iibinta / qaybinta tigidhada bakhtiyaa-nasiibka, khamaarka iyo ciyaaraha faa'iidada leh (marka laga reebo tikidhada baqtiyaanasiinta ee) xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada carruurta, cibaadada, xarumaha carruurta, maktabadaha, matxafyada, dhismayaasha xafiisyada dawladda iyo maamulka degaanka, iyo sidoo kale meelo ay mamnuucaan maamulka degaanka.
Waa mamnuuc inaad ka qayb qaadatid dadka khamaaraya ee aan haynin 18 da 'sano, iyo inay ku ciyaaraan casino waa sannad-guurada 21.
Farsamooyin dheeraad ah oo ku saabsan mas'uuliyadda bulshadeed ee ka shaqeeyayaasha khamaaristu waa in la xakameeyo caddadka lacagta kaashka ah ee kharashka khamaarka, laga bilaabo Adeegga Korjoogteynta Maaliyadda ee Georgia. Abaabulid kasta oo cayaaraha ah waxaa waajib ku ah inuu wargeliyo wakiilada dadka adeegga, kuwaas oo kharashka ku baxa lacag ka badan GEL 3 kun. / $ 1243 maalintii. Adeegga ah in aan macluumaadkaan u gudbin shaqaaleeyaha waxaa lagu ganaaxi karaa xaddiga GEL laga bilaabo 2-6 kun. / $ 830-2490. Qodobka ugu muhiimsan waa abuurista Adeegyada Kormeerka Maaliyadeed ee liiska lagu magacaabo liiska madow - liiska dadka ka mamnuucaya ka qaybgalka khamaar kasto oo ku yaala gobolka Joorjiya. Liiskani wuxuu inta badan ka kooban yahay wakiilo ka socda kooxaha argagixisada ee caalamiga ah iyo burcadbadeedda.
Sanado badan oo Georgia ah waxaa jira doodo ku saabsan baahida loo qabo in la mamnuuco xayeysiiska khamaarka telefishanka, raadiyaha iyo warbaahinta kale. Laakiin hadda fikradda ku saabsan saamaynta xun ee xayeysiisyada noocaas ahi ma helayaan taageerada dadka guud.
0.1 Liiska ugu sareeya 10 Goobaha Kubadda Cagta ee Goobta Goobta
2.1 Khamaarka internetka ee Georgia
3 Georgia Online - Khamaarista Georgia
3.0.1 Khamaarista online ee Georgia - asalka taariikheed
3.0.2 Jihada ku xiran ganacsiga khamaarka internetka?
3.0.3 Taas xaqiiqdaas sharciyadani macnaheedu waa ciyaaryahan?
3.1 Sida loo bilaabo cayaaraha ciyaaraha online-ka ee Georgia?
3.1.1 Goobta Goobta iyo asalka taariikhda gaaban
3.1.2 Georgia ee khariidada Aasiya
3.1.3 Soojiidashada Tbilisi
3.1.4 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Georgia iyo Georgian
3.2 Baaskiilada Georgia: Canshuuraha
3.3 Casino Casino Online
3.4 Xaaladaha helitaanka oggolaansho
3.5 Ujrada ruqsadda
3.5.1 Lacagta ruqsadda ee loogu talagalay qabanqaabinta khamaarka ee Georgia
3.5.2 maamulka lacagta
3.7 Farsamaynta hawlwadeennada xakamaynta
3.8 Canshuurta khamaarka
3.9 Noocyada khamaarka